Garlic: Vermifuge, hypotensive, depurative, antibiotic and antiseptic - Afrikhepri Fondation
I-Garlic: I-Vermifuge, i-hypotensive, i-depurative, i-antibiotic ne-antiseptic
DEGibhithe lasendulo, ugalikhi lwalusetshenziswa kabanzi. Sasatshalaliswa mahhala ngesinkwa kubakhi bephiramidi. Kwaziswa kakhulu, laba abasabayo abathandabuzi ukwenqaba ukusebenza uma imali incishisiwe. U-Garlic wayevele waqashelwa amandla nokuvikelwa ezifweni ezikunikeza. Zitholakala ku-sarcophagi yamaphiramidi, lapho asiza khona umufi ukwenza uhambo lwakhe emanzini aphesheya. UGarlic ubuye wasetshenziselwa ukwenza izidumbu, futhi wayaziwa ngesenzo sawo esinamandla sokulwa nezinyoka. AmaHeberu ngesikhathi sokuFuduka cishe ngonyaka we-1250 BC, ayethatha u -galikhi njengempahla eyigugu kakhulu eyashiywa eGibhithe. Ogwadule, ngokusho kukaMose, abanye bebenganqikazi ukukhononda, ngokusho kweNcwadi Yezinombolo (yesine yezincwadi zokuqala ezinhlanu ezakha iTorah): "Sikhumbula ukhukhamba, amakhabe, amaliki, anyanisi kanye 'igalikhi'.
I-Garlic nayo inomlando wokusetshenziswa emithini ye-Ayurvedic. Lolu hlelo lwasendulo lokupholisa amaNdiya lwalusebenzisa ugalikhi njengomuthi wamakhambi ongafudumeza umzimba, uthuthukise ukujikeleza kwegazi futhi welaphe nokuphazamiseka kokudla.
I-garlic entsha, uma ihlutshiwe noma ichotshoziwe, ikhiqiza i-allicin enezakhiwo ezaziwayo zama-antibiotic kanye ne-ajoene eyi-anticoagulant. Yingakho igalikhi isetshenziswa njenge-prophylactic ezifweni ezahlukahlukene: isifo sohudo, isifo sohudo, ikholera, isifo, i-diphtheria.
I-garlic iyasiza futhi ukulwa nomfutho wegazi ophakeme ngoba ubangela i-capillary vasodilatation. Ngaphezu kwalokho, i-allicin inezinyathelo zokuvimbela izicubu, ngakho-ke idumela layo liyi-anti-cancer.
Sekukonke, ugarlikhi unochungechunge oluhlaba umxhwele lwezinto zokwelapha eziqashelwa ososayensi: isinqandakuvunda, i-bactericidal, i-depurative, isisu, i-dewormer, i-anti-cancer, i-febrifuge, i-aphrodisiac, i-hypotensive. Lokhu kuchaza ukuthi kungani kubhekwe kusukela ku-Antiquity njenge-panacea yangempela.
Lonke isitshalo, kodwa ikakhulukazi isibani iqukethe alliin (glucoside sulphur), i-enzyme (alliinase), amavithamini A1, B1, B2, C no niacin (Vitamin B complex). I alliin ayinaphunga, kodwa ngenxa yesenzo alliinase, okuyinto ethatha lapho garlic uchotshoziwe, kuqala kuba allicin futhi diallyl disulfide (glucoside genin), okuyizinto izithako zako ezibaluleke kakhulu asebenzayo ukuthi lona kwephunga laso elibi isici.
I-Alliin nedayimane disulfide yizinto eziguquguqukayo kakhulu, ezincibilika kalula oketshezini nakumagesi. Ethwelwe ngegazi, agcwele kuzo zonke izitho nezicubu zomzimba. Ngakho-ke, zisebenza kuwo wonke umzimba, kepha ngamandla amakhulu ezithweni ezisuswa ngazo: amaphaphu kanye ne-bronchi, izinso nesikhumba.
Izakhiwo eziningi zegalikhi zingafingqwa kanje:
Ngezilinganiso eziphezulu, i-garlic ibangela ukwehla kwegazi, kokubili okuphezulu nokulingana. Inesenzo sokuvasodilating, yingakho siphakanyiswa kakhulu kumagciwane aphethwe yi-hypertension, i-arteriosclerosis nenhliziyo (i-angina pectoris noma i-infarction). I-garlic ngumngane omkhulu wesistimu yokujikeleza.
Garlic izenzo njengenhlangano agent antiplatelet (umelana ukuthambekela ngokweqile zegazi ukuze eyihlathi amahlule ukwakha) futhi njengoba fibrinolytic (fibrin ziyoncibilika, amaprotheni esakha amahlule). Ngakho kuyasiza ukwandisa onomopho, ngakho-ke Kunconywa kubantu abaphethwe thrombosis, embolism noma unhlangothi ezizenzakalelayo liningi igazi.
Kwehlisa amazinga we-LDL (cholesterol embi) egazini, mhlawumbe ngoba kwenza kube nzima ukuwamunca emathunjini. Kukhonjisiwe ukuthi phakathi namahora alandela ukumuncwa kwesidlo sasekuseni ngokususelwa ku-toast ene-buttered, izinga le-cholesterol lenyuka ngama-20%; kepha uma uhlikihla isinkwa ngogalikhi omningi bese ufaka ibhotela, lokhu kwanda akwenzeki. Lokhu okwashiwo yisayensi kushicilelwe kwi-Indian Journal of Nutrition (vol. 13, no. 1).
Njengoba igalikhi ibeka izinga likashukela egazini, abanesifo sikashukela kanye nabantu abakhuluphele kakhulu bangazuza ngokuyisebenzisa (ngaphezu kwezinye izindlela zokwelapha), kanye nalabo abanomlando wesifo sikashukela, njengendlela yokuvimbela.
I-antibiotic kanye ne-antiseptic jikelele
Sekuyiminyaka engamashumi amahlanu, ucwaningo lwenziwe ezindaweni zokulwa nezifo ezithathelwanayo. Kuye kwenzeka ukufakazela isenzo saso sokulwa namagciwane kokubili ku-vivo nase-in vitro ngokumelene nama-microorganisms alandelayo:
I-Escherichia coli, ebangela i-dysbacteriosis yamathumbu kanye nokutheleleka kwethamo lomchamo
I-Salmonella typhi, ebhekene nomkhuhlane we-typhoid kanye nezinye izinhlobo ze-Salmonella ezibangela izifo ezinzima zamathumbu
IShigella dysenteriae, imbangela yesifo sohudo se-bacillary
staphylococci ne streptococci ezibangela amathumba nezinye izifo zesikhumba;
amakhowe azo zonke izinhlobo, imvubelo nezinye amagciwane, njenge-herpes. Kukholelwa ukuthi izithako ezisebenzayo zikagalikhi zihambisana ne-nucleic acid yegciwane, ngaleyo ndlela zinciphisa ukusabalala kwayo.
Amandla kagciwane egaliki emgodleni wamathumbu asuke ekhetha amabhaktheriya e-pathogenic, ngaleyo ndlela ehlonipha isitshalo esivamile samaprophytic, esizuzisa. Kunenzuzo kulezi zinambuzane ezibizwa ngokuthi i-antibiotics ngoba ilawula umthambo wamathumbu esikhundleni sokuyibhubhisa.
Ukusetshenziswa kwalo kuboniswa ngokucacile:
kuzo zonke izinhlobo zokuhuda, i-gastroenteritis ne-colitis;
ku-salmonellosis (ukuthelelwa kwamathumbu emathunjini ngokuvamile okubangelwa ukudla okuphephile);
e-dysbacteriosis emathunjini (ukuguqulwa kwesilinganiso semithi emathunjini), ngokuvamile okubangelwa ukusetshenziswa kwama-antibiotics;
ekuvuthweni kwe-dyspepsia, okukhiqiza i-flatulence ekoloni;
ezindaweni zokuvuthwa kwe-urinary (i-cystitis ne-pyelonephritis), evame ukubangelwa u-Esckerichia coli;
ngokutheleleka kwe-bronchial (i-bronchitis enesifo esiphuthumayo nesiguli), ngoba lapho i-diallyl disulfide isuswa ngumzila wokuphefumula, iyasebenza ngokuqondile embukheni we-bronchial. Ngaphezu kwalokho, i-expectorant ne-antiasthmatic.
I-garlic yandisa umsebenzi wamaseli okuvikela omzimba, i-lymphocytes nama-macrophages. Lawa maseli, ajikeleza egazini, asivikela ezincane zamagciwane futhi akwazi ukubhubhisa amangqamuzana omdlavuza, okungenani ezinyathelweni zokuqala zesisu.
Ukusetshenziswa kwegalikhi kunomphumela omuhle kuwo wonke izifo ezithathelwanayo, ngoba kwandisa amandla okuzivikela emzimbeni wethu, kuyilapho kubhidliza ngokuqondile izinambuzane ezithile. I-garlic isetshenziswe ngempumelelo ethile njengengxenye yokwelashwa kwe-AIDS.
Ngokumelene nama-parasite emathunjini avame kakhulu. I-garlic iyasebenza kakhulu ngokumelene nama-roundworms nama-pinworms (izinambuzane ezincane ezimhlophe ezenza ukuba i-anus ingabonakali ezinganeni).
Ukwehla kwamalungu omzimba nokuthungatha
I-Garlic ivuselela ukuphendula kwamakhemikhali futhi igqugquzela izinqubo zokukhishwa kwemfucuza (catabolism). Yingakho kukhonjiswa emazweni obuthakathaka noma ukukhathala, ukungasebenzi kanye nezinsalela ze-asidi eyeqile (i-gout, i-arthritis, i-rheumatism ethile).
I-Garlic inconywa kakhulu ekwelashweni kokulwa nokubhema. It normalizes umfutho wegazi ophakeme ngokuvamile obhemayo, ikhuthaza ukuqedwa kohlehleko agcinwe kule bronchi kanye ukuvuselelwa nolwelwesi lwamafinyila abo. Kuyasiza ukulwa nesifiso sokubhema, mhlawumbe ngenxa yephunga elijwayelekile elisinikeza ukuphefumula.
Ukuvimbela izicubu ezimbi
Ikakhulukazi umdlavuza wegazi. Lokhu kungenzeka ngenxa yesenzo salo esilawulayo semithambo yamathumbu emathunjini kanye nokusebenza ngokujwayelekile kokugaya ukudla. Kodwa kungase kuhlotshaniswe nesenzo sayo kuzo zonke izimo zamakhemikhali zomzimba (imetabolism).
Abanye baye bathi bagula izicubu zomdlavuza ngegalikhi, okuyinto ngokwemibono yethu, engenakho ukukhwabanisa kwesayensi futhi inikeza iziguli amathemba amanga. Ngakho-ke, okwamanje, kungacelwa kuphela njengendlela yokuvimbela.
Ingcezu ye-garlic echotshoziwe isetshenziswa ku-callus, ukuyifaka nge-bandage ye-adhesive noma ibhande. Ezinsukwini ezimbili noma ezintathu, i-callus iyancipha futhi ikhubaza, ivumela ukuthi isuswe kalula.
I-garlic yasendle (i-Allium ursinum L.) igallic zasendle enezici ezifana kakhulu nezogalikhi ezitshalwe, nakuba ukubekezelelana kokugaya ukudla kungcono kakhulu.
Le garlic yasendle ayihlwanyelwe ngoba, ngaphezu kokusabalalisa kwayo okubanzi, ayikwazi ukugcinwa isikhathi eside njengogarli ejwayelekile, enezinto ezifanayo nokunye okuyaziwa kakhulu.
I-garlic yasendle kumele idliwe yintsha ngoba uma imile, ilahlekelwa yiningi.
Ukusetshenziswa kwegalikhi ngokulinganisa okuphezulu, ikakhulukazi okuluhlaza noma okukhishwe, akunconywa uma kwenzeka kuphazamiseka. kungenxa yemvelaphi ebuhlungu (amanxeba, izingozi, njll) noma ukuya esikhathini (imithetho eningi).
Ngenxa yempembelelo yayo egazini egazini, i-garlic ekwenzeni izinga eliphezulu ingenza isikhathi siphumelele futhi senze kube nzima ukuthi izinqubo ze-coagulation zibe nzima.
Ukusetshenziswa okuqhubekayo kwamazinga aphezulu egarlic akukhuthazwa ngesikhathi sokukhulelwa.
I-Garlic emnyama iVegavero® | 6000 mg: Umthamo Ophakeme Kakhulu | Ngaphandle Kwengezwe Okufakelwayo | Kuhlolwe ku ...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 20,90
Thenga i- € 20,90
Ukuhlushwa okuphezulu Okungenaphunga Ama-Garlic Capsules 15000mg - 180 Softgels Odorless Garlic Oil ...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 16,99
Thenga i- € 16,99
IMvelo ELUHLAZA Imfucumfucu Emnyama (Amaphilisi ayi-180 ka-600 mg) - 9000 mg: Umthamo Ophakeme Kakhulu - 100% ...
Okusha okungu-1 kusuka ku- € 22,90
Thenga i- € 22,90
I-Garlic Bio 280mg - 200 amaphilisi emifino
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 9,99
Super Garlic Force 6000mg - 120 amaphilisi angenaphunga
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 9,00
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 25, 2020 4:41 PM
Inkulumo eyenziwe nguHaile Selassie e-AU ngonyaka ka-1963 no-64
Izimfundiso zikaWayne Dyer (Incwadi)
Ososayensi bathola ukuthi ukuzila ukudla okudala ukuvuselelwa kweseli
Impilo yemilingo yomuntu - Annie Besant (PDF)
I-Malcom X University yezokwelapha nezempilo yezesayensi ivuleka eChicago